Tuesday October 02, 2018 - 20:44:27 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wasaarada difaaca Ruushka ayaa markii ugu horreysay shaacisay tirada ciidanka ka joogo wadanka Suurya xilli dadka Ruushaanka ah ee u safraya wadankaasi ay si aad ah iskusoo tarayaaan waaayadan dambe.
Waziirka difaaca ruushka Sergey Lavrov ayaa ka dhawaajiyey in bishii lasoo dhaafay ay gudaha wadanka Suuriya billad Sharafeed ku gudoonsiiyeen ugu yaraan 63 Kun oo askari oo ka socda wadanka Ruushka kana howlgala gobollada kala duwan ee wadankaasi.
Waxa uu tilmaamay in ciidanka gaaraya 63da kun ee askari ay si toos ah uga qeyb qaateen dagaalka islaam la dirirka ah ee ka soconaya gudaha wadanka Suuriya, oo dowladda Ruushka ay kusoo biirtay Sanadkii 2015k.
Hadalka Waziirka ma aheyn mid jaan go’an oo uu ku sheegay tirada dhammeystiran ee ciidanka ruushka ee ku sugan gudaha wadanka Suuriya, balse waxa uu ishaarayey kaliya askarta ay guddoonsiiyeen billad sharafka, taas oo laga fahmayo in ciidanka Ruushka ee jooga suuriya ay ka badan yihiin 63 Kun oo askari.
Hadalkan ayaa kusoo aadaya xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in ciidanka Ruushka ee wadanka Suuriya ku sugan ay ciidameeyaan, Askarta howl gabka ah ee u dhashay wadanka Ruushka, kuwaas oo baasaboorro shacabnimo kusoo galo wadanka, si ay dagaalka uga qeyb qaataan dowladoodana uga helaan qarashaad lacageed oo xad dhaaf ah.
3dii sano ee ugu danbeysay ayay si aad ah iskusoo tarayeen dadka ruushanka ah ee u safraya wadanka Suuriya, waxaana la sheegaya in sanadka 2018 Ay si aad ah usii badanayaan.
Hey’adda Sirdoonka guud ee wadanka Ruushanka ee magaceeda lagusoo gaabiyo FSB ayaa faafisay taqriir ay uga hadleyso dadka u dhashay wadanka ruushka ee lixdi bil ee ugu horreysay sanadkan u safray wadanka suuriya kuwaas oo tiradooda ay kor u dhaafeyso illaa 17 Kun oo qof, waxaana la filayaa in bilaha dhiman ay sare usii kacdo.
Sanadki 2016 ayay gaartay tirada dadka ruushanka ah ee u safray wadanka Suurya illaa 22 Kun oo qof, halka sanadkii 2017 ka oo idlina ay gaartay illaa 25Kun oo qof.
Dadkan faraha badan ee usoo safraya wadanka Suuriya ayaa lagusoo waramayaa inay si dadban qeyb uga yihiin dagaalka ka soconaya wadanka Suuriya, iyagoo ka garab shaqeynaya ciidanka militaryga ruushka ee howl galada islaam la dirirka ah ka wado dhulka barakeysan ee Shaam.
Ilo xog ogaal ah oo ku sugan gudaha wadanka Ruushka ayaa sheegaya inay aad u yaryihiin dadka shacabka ah ee u safraya dhanka suuriya, dadkaan faraha badan ee halkaas ku aadaya baasaboorada shacabkana ay yihiin ciidan howl gab ah oo si hoose uga garab dagaalamaya ciidanka ruushka iyo Shirkado si khaas ah loo leeyahay sida shirkada Wagner group oo cidan badan ka joogaan wadanka Suuriya.
Wakaalada Reuters oo soo xiganeysa ilo xog ogaal ah ayaa faafisay in kumanaan askari oo calooshood ushaqeystayaal ah ay ku sugan yihiin wadanka Suurya, kuwaas oo dhamaantood baasaboor shacab ah kusoo galay wadanka, iyagoo ka faaideysanaya baaq uga yimid xukuumada Moskow.
Hey’adda Sirdoonka Ruushka FSB ee sheegtay in bilihi ugu horeeyey ee sanadkan ay u safreen wadanka suuriya dad gaaraya 17kun oo qof ayaa la sheegaya inuu masuul toos ah ka yahay la socodka dhaqdhaqaaqa dadka ruushka ah ee kusugan daafaha caalamka, waana hey’ad fac weyn oo soo shaqeyneysay tan iyo sanadkii 1922kii.
Dhinaca kale wasaradda Difaaca dowladda Ruushka waxay ku faantay in dad badan 100 kun oo qof shacab ah ay ku dishay gobollada kala duwan ee wadankaas balse waxay dadkaas ku sifaysay in ay ahaayeen kooxo Argagaxiso ah oo kasoo horjeeday Nidaamka uu madaxda ka yahay Bishaar Al-Asad.